Akụkọ - Ruiyi tire bụ ọrụ kwesiri ịlụ ọgụ megide ọnọdụ oria ojoo
Car Mmezi Ramp
Ubi Ngwá Ọrụ Ifuru Akwa Ifuru
Ugbo ala ezumike
Ihe eji eme igwe
Ruiyi taya bụ ọrụ ga-alụ ọgụ megide ọnọdụ ọrịa
N’afọ 2020, ọrịa pneumonia na-akacha emeela gafere mba ahụ. Na ọgụ megide ọrịa ahụ, Ruiyi tire, dịka onye ndu na ụlọ ọrụ a, na-arụ ọrụ ọhaneze. Site na omume ndị a dị ka ịmaliteghachi ọrụ, na-enyere ndị mmekọ na ụlọ ahịa aka ịlaghachi ọrụ n'enweghị nsogbu, yana ịmụrụ ọzụzụ mgbochi ọrịa ntanetị, Ruiyi taya egosiwo mkpebi ya iji merie nsogbu na obi ike iji merie ọnọdụ ọrịa ahụ na ndị mmadụ niile. obodo.
Idozi zuru oke nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ịlaghachi ọrụ
Na oge pụrụ iche, ịmaliteghachi ọrụ dị larịị bụ okwute ballast iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba kwụsie ike. Ruiyi tire ewerewo ihe dị mkpa iji buru ọrụ gbasara ọha. N'okpuru ebumnuche nke ịrụ ezigbo ọrụ na mgbochi na njikwa ọrịa na-efe efe, Ruiyi taya arụ ọrụ kachasị na ụlọ ọrụ ahụ wee maliteghachi ọrụ na nrụpụta ọrụ. Novel coronavirus pneumonia e guzobere na oge mbụ, na-eduga otu ahụ iji mepụta atụmatụ mgbochi ọhụụ 24 maka okpueze pneumonia ọhụrụ, ma were usoro ụfọdụ dị ka mmụba okpomọkụ na njem, njikwa nri na ụlọ iri nri, disinfection of ebe ọha na eze na ulo obibi, wdg, iji nye ndi oru gburugburu ebe obibi di nchebe ma mee nzaghachi ziri ezi nke oria a.
Na-ewere ndị ahịa dị ka etiti, ọrụ ụlọ ahịa dị nchebe karị
Storeslọ ahịa ụlọ ahịa Ruiyi na-azaghachi nke ọma ma na-emejuputa usoro mgbochi ọrịa, na ọrụ mgbochi ọrịa ahụ zutere ụkpụrụ gọọmentị mpaghara ịmaliteghachi. Na mgbakwunye na ọrụ mgbochi ọrịa na-efe efe dịka nchọpụta ọnọdụ okpomọkụ na disinfection mpaghara, ụlọ ahịa nwere ọnọdụ na-ebuli nkwalite ọrụ, na-enye ọrụ disinfection ụgbọ ala na ihe mgbochi ọrịa maka ndị ahịa rutere n'ụlọ ahịa ahụ, na-enye ọrụ ọnụ ụzọ nnyefe na nnyefe n'ọnụ ụzọ site n'ụlọ ruo n'ụlọ maka ndị ahịa na-adabaghị n'ụlọ ahịa ahụ.
Transmissionga n'ihu nke usoro nchebe iji nyere aka igbochi ọrịa
N'ihe banyere ọrịa ntiwapụ ahụ, Ruiyi na-agbaso mmụọ mmụọ nke "ịga n'ihu na ịkwụsịtụ", na-arụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze, soro ndị obodo niile na-ekerịta otu ụgbọ mmiri ahụ, ma na-enyekwa aka n'ịlụso ọrịa ahụ ọgụ . Ruiyi tire ga-anọgide na-elebara ọganihu nke ọrụ mgbochi na ịchịkwa ọrụ, na-aga n'ihu na-enye aka na ọrụ mgbochi ọrịa, ma kwenyesie ike na a ga-emeri ọrịa ahụ na njedebe!
Adreesị: HUANDA Road, Lingang Industrial Park, West Coast New District, Qingdao City, Shandong Province, China
Concrete igwekota Truck, China Pu ụfụfụ Wheel, China PU wiil, Caster ụkwụ anọ, PU Wheel, China Concrete igwekota,